वर्षा आकाशको ‘सानु माया’ ? (भिडियो) « Mazzako Online
वर्षा आकाशको ‘सानु माया’ ? (भिडियो)
समाजसेवी गायक पूर्ण लिम्बुको नया गीत बजारमा रिलिज भएको छ । अंग्रेजी नया बर्षको अवसर पारेर आज उनले आफ्नो नया गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले सबै दर्शक श्रोताहरुलाई नया बर्षको शुभकामना दिदै आफ्नो नया गीत “सानु माया” रिलिज गरे । प्रेम कृष्ण बजगाईंको शब्द र संगीत रहेको यस गीतमा पूर्ण लिम्बु र मेलिना राईको स्वर समावेश रहेको छ । गीतमा शिला बहादुर मोक्तानको संगीत संयोजन रहेको छ । गीत जति राम्रो बनेको छ त्यस हिसाबले म्युजिक भिडियो पनि उत्तिकै दमदार र आकर्षक बनेको छ । अहिलेका चर्चित फिल्म निर्देशक मिलन चाम्सले यस भिडियोको निर्देशन गरेका हुन् ।
भिडियोमा नायक आकाश श्रेष्ठ र वर्षा शिवाकोटीको अभिनय रहेको छ । सुदिप बरालको छायांकन रहेको भिडियोमा अहिलेका चर्चित नृत्य निर्देशक कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको छ । चाम्स इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति रहेको यस भिडियोमा वर्षा र आकाशको जोडी निकै सुन्दर देखिएको छ भने निर्देशन र छायांकनको हिसाबले भिडियो कुनै चलचित्रको गीतको भिडियो भन्दा कम देखिदैन । हुन त प्राय पूर्ण लिम्बुले समाज परिवर्तन अनुरुपका गीतहरु नै बजारमा लिएर आएका छन् । तर यसपटक उनि केहि फरक हिसाबले प्रस्तुत हुन खोजेका हुन् । उनको यसपटकको गीतमा प्रेम भाव समेटिएको छ र प्रेम जोडीहरुको लागि बिशेष यो गीत तयार गरिएको छ । पूर्ण लिम्बु नेपाली गीत संगीत क्षेत्रमा आफुलाई फरक ढंगले अगाडी बढाई रहेका एक गायक हुन् ।
हुन त उनको परिचय धेरै अर्थले खुल्छ तर सांगीतिक माहोलमा आफुलाई उनि एक गायकको स्थान नै दिन चाहनछन् । मनको इच्छाले उनि गीत संगीतमा लागे तर कुनै स्वार्थले भने होइन । गीत संगीतमा उनको प्रवेशको कारण बेग्लै छ । उनि भूपू बेलायती सैनिक हुन् भने अहिले समाजसेवी हुन् । समाजसेवाको हिसाबले उनि धेरै संघ संस्थामा आबद्ध रहेका छन् । समाजसेवाको उनको अहिलेको वास्तविक यात्रा हो । आफुले सक्ने भन्दा अधिक सेवा उनले गरेर देखाईसकेका छन् जसको धेरै उदहारण रहेका छन् । गीत संगीतको माध्यमबाट पनि समाजसेवा गर्न सकिन्छ र मान्छेहरुलाई जागरुक बनाउन सकिन्छ भन्ने उनको विचार हो ।
यहि हिसाबले पनि उनले गीत संगीतमा आफुलाई आबद्ध गराएका हुन् । गन्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने उनको धेरै गीत बजारमा आएको छैन । तर बिस्तारै एक पछि अर्को गीत भने आईरहेको छ । आगामी दिन अझै राम्रो प्रस्तुति लिएर आउने र समाज परिवर्तन हेतु नै आफ्नो कदम अगाडी बढाउने उनको भनाई रहेको छ । हेर्नुस भिडियो :